August 19 2017 01:00:58
Dad doonay in ay Kilyahooda iibsadaan oo Xabsi la dhigay
Ciidamada booliiska dalka Hindiya ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen isbitaal la sheegay in uu ka socday ganacsi sharci daro ah oo ku aadan kala iibsiga kilyaha bini'aadamka.
· mamaan on June 05 2016 · Read More · 4362 Reads ·
Madaxweynaha Soomaaliya oo Maanta kusii Jeeda Kenya iyo Xog ku aadan Ujeedka Socdaalkiisa
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa in ay safar ku tagaan magaalada Nairobi ee Caasimada dalka Kenya.
· mamaan on June 05 2016 · Read More · 5277 Reads ·
· admin on June 04 2016 · Read More · 1409 Reads ·
· admin on June 04 2016 · Read More · 1112 Reads ·
Daawo Sawirada: Sheekh Shariif oo kulamo la qaatay Wasiirada Arimaha Dibadda Kenya & diblomaasiyiin...
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed oo maalmahan booqanayey magaalada Nairobi ayaa kulamo la qaatay masuuliyiin ka tirsan dowladaha Maraykanka iyo Kenya.
· Caydiid on June 04 2016 · Read More · 6592 Reads ·
In ka badan 260 Arday oo ka Qalin jebisay Iskuulka dadka waa weyn wax lagu baro ee Masst (Daawo Sawirada)
Munaasibadaan oo aheyd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana shahaadooyin lagu gudoonsiinayey ku dhawaad 300 arday oo dhameystay waxbarashada dugisaga sare ee musta ayaa lagu qabtay Magaalada Mqdisho .
· mamaan on June 04 2016 · Read More · 3713 Reads ·
Daawo Sawirada'' Deeq maanta la gaarsiiyay Maxaabiista ku xiran Xabsiga Dhaxe ee Muqdisho
Hey’adda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta deeq raashin ah gaarsiisay Xabsiga Dhexe ee Muqdisho, halkaasoo ay ku xiran yihiin Maxaabiis fara badan.
· mamaan on June 04 2016 · Read More · 3928 Reads ·
Tiro Madaafiic ah oo caawa ku soo dhacday qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho
Dhowr madfac oo hoobiyeyaal ah ayaa goor dhow oo caawa fiidnimadii ah waxay ku soo dhaceen qeybo ka mid ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
· Caydiid on June 04 2016 · Read More · 4364 Reads ·
Daawo Sawirada "Tartan lagu maamuusayo so dhaweeynta Bisha barakeysan ee Ramadaan oo lagu Qabtay Vänersborg!!
Waxaa maanta oo taariiqdu ku beygneyd 2016/6/4 ka xariga laga jaray tartan lagu maamuusayo so dhaweeynta bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga Sportiga ee islamiska kultur center ee magalada Vänersborg IKC.
· admin on June 04 2016 · Read More · 2882 Reads ·
Dal ku yaalla Koonfurta qaarada Amerika oo xubin buuxda ka noqday Ururka Midowga Afrika
Wadanka Haiti oo ah jamhuuriyad ku taalla badda Caribbeanka ee koonfurta qaarada Amerika ayaa si rasmi ah xubin uga noqotay ururka Midowga afrika.
· Caydiid on June 04 2016 · Read More · 7975 Reads ·
Soomaaliya oo ka Qeyb gashay Shir Muhiim ah oo ka dhacay dalka Seycheles (Daawo Sawirada)
Wafdi balaadhan uu hoggaminayo, Ra’isal wasaare kuxigeenka Dawlada Federalka Soomaliyeed, ayaa ka qayb-galay, kalfadhigii 19aad ee Gollaha caalamiga ee Bahwaynta ka hortaga Khatarta Baddaha Soomaliyeed (The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia – CGPSC),
· mamaan on June 04 2016 · Read More · 4349 Reads ·
Page 623 of 709: 1...620621622623624625626...709